Zava-pisotro 5 maraina ho an'ny hoditra madio - Levitra
Dia Singam-Bolo Fanafody An-Trano Gynaec Fironana Mpahay Nahatratra Fampihenan-Danja Tsy Maintsy Jerena Fitness Beauty Bridal Drafitra Sy Torohevitra
Zava-pisotro 5 maraina ho an'ny hoditra madio
Ny zava-pisotro maraina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny metabolisma amin'ny vatana sy ny fizotran'ny fanadiovana ny vavony. Ny fanombohana ny andro amin'ny fisotroana rano iray na roa litatra dia manampy amin'ny fanesorana ireo fako metabolika rehetra amin'ny vatana ary, avy eo, dia mitondra any amin'ny hoditra madio. Toy izany koa, misy zava-pisotro hafa maraina izay manampy amin'ny fahazoana hoditra mazava sy salama ho an'ny lahy sy ny vavy. Dr Stuti Khare Shukla dia mizara zava-pisotro tena ilaina dimy azonao hanombohana ny andronao amin'ny hoditra mamirapiratra sy mahasalama.
Ny fisotroana rano be dia be dia be dia be dia be ny vokatra. Ny vatantsika dia misy rano 75 isan-jato amin'ny endrika tsiranoka, ary ny rano dia manana asa maro izay mitazona ny hoditra hadio sy tsy fahampian-drano mahasalama, etsy ankilany, mahatonga ny hoditra ho maina sy hangidihidy. Ny fanjifana rano 4,5 ka hatramin'ny 5,5 litatra isan'andro dia mampisondrotra ny vatanao amin'ny alika mineraly sy oksizena, mamoaka ny poizina rehetra ao aminy, ary miteraka ny fihazonana ny fifandanjan'ny electrolyte amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny fanamainana hoditra, hisorohana ny mony.
Rano tantely sy voasarimakirana
Manampia tantely roa na telo sotro ary ranom-boasarimakirana sotro ao anaty rano satria toy ny electrolyte izy io ary mamokatra singa antioksida sy anti-antitra. Manampy amin'ny fanadiovana ireo poizina manimba amin'ny vatanao izy io ary koa manampy amin'ny fihenan-danja. Raha manana tantely miady amin'ny fahanterana izay mitazona ny hoditrao ny tantely, ny voasarimakirana dia misy vitamina C izay manampy amin'ny sela vaovao sy ny famelomana ny hoditra.
karazana fantsika isan-karazany
fanazaran-tena handoro tavy tummy
Ny voankazo dia manan-karena amin'ny vitamina sy micronutrients. Ny voankazo toy ny karaoty, betiravy, ampongabendanitra ary na ny legioma toy ny ovy dia misy mineraly sy vitamina manankarena izay manampy amin'ny fisorohana ny mony ary hampiakatra ny hoditra salama. Ny karaoty sy bitika dia misy vitamina A izay misoroka ny mony, ny ketrona ary ny pigmentation ary manampy amin'ny fitazonana hoditra salama, ny ranom-boankazo dia manome fivezivezena ra tsara ary mitazona ny hoditra ho salama. Na ny salady, voatabia sy kôkômbra aza, dia afaka misoroka ny mony koa raha tafiditra ao anaty sakafo mahazatra ny salady ireo.
Raha tia dite ianao dia ampio dite maitso na dite voasarimakirana amin'ny sakafo fihinanao. Manakana ny mony izy io ary misy vitamina C miaraka amin'ny otrikaina hafa izay mitazona ny hoditra ho salama sy mamirapiratra.
Turmeric dia fanafody nentim-paharazana sy Ayurveda izay miasa toy ny antibiotika sy ny antiviral agents. Izy io dia manan-karena amin'ny alàlan'ny antioxidant izay mampihemotra ny fizotry ny fahanterana. Ny fanampiana sotro turmerika iray sotro amin'ny ronono na rano mafana isa-maraina dia mety hanome vokatra tsara ho an'ny hoditra salama.
Vakio ihany koa: Sakafo 10 sy zava-pisotro misy otrikaina C tsara indrindra ho an'ny hoditra
Sokajy Fampihenan-Danja Indian Amboary Eo Noho Eo
salama eritreritra ny andro
tsy misy teny nindramina namana akaiky indrindra
tombontsoa azo avy amin'ny fanosotra soda amin'ny tarehy
ny reny ny andro nalaina ho an'ny ankizy
volony nanapaka fomba ny ankizivavy
ny fomba fampiasana ny menaka voanio volo very